Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » COVID-19 Delta Variant oo ku sii fideysa adduunka oo dhan
Wararka Australia • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Indho Indho Indoneesiya • Wararka Jaban ee Japan • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Tag goobta aysan talaaladu aad u sareeyn, waxaadna u egtahay inaad fiirineyso meel COVID-19 Delta Variant ay ku korinayso madaxiisa foosha xun isla markaana ay ku soo kordheyso kiisaska coronavirus markale.
Dhibaatada degdega ah ee Delta Variant waa inay si aad ah u faafo.
Waqtigaan la joogo, Variant-ka wuxuu ku sii badanayaa Aasiya toddobaadkan.
Australia iyo Kuuriyada Koonfureed, infekshannada kaladuwan waxay ku garaacayaan tirooyin rikoodh ah dalal qaar si ay u adkeeyaan borotokoollada mar kale iyagoo muwaadiniinta ugu baaqaya inay is tallaalaan.
COVID-19 Delta Variant waxaa markii ugu horreysay laga helay Hindiya Diseembar 2020. 6-dii bilood ee la soo dhaafay, wuxuu ku faafay illaa 100 dal. Dhawaan, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu ka digay in Variant-ku uu dhawaan noqon karo nooca ugu badan ee coronavirus.
Gobolka New South Wales, Australia, kororka maalinlaha ah ee kiisaska cusub ilaa iyo sanadkaan ayaa lasoo sheegay. Cudurkii ugu dambeeyay ee dillaacay wuxuu kor u kacay 200 iyadoo inta badan kiisaskaas ay sababeen Delta Kala Duwan. Sydney, oo ah guriga shanaad ee 25 milyan ee dadka ku nool, ayaa kalabar loo maraa laba toddobaad oo la xirayo si loo xakameeyo dillaaca, taas oo cabsi gelisay mas'uuliyiinta iyada oo ay socdaan hawlgal tallaal oo waddanka oo dhan ah.
Australia, sida dalal kale oo badan oo Aasiya ah, waxay la halgamaysay inay dadka tallaasho maadaama guulihii ugu horreeyay ee ay ka gaareen xakamaynta cudurka faafa ay u horseeday inay ka gaabsato tallaalka, soo-saareyaashuna way ka gaabiyeen inay markab qaadsiiyaan Australia waxay si buuxda u talaashay kaliya 6 boqolkiiba dadkeeda, halka Japan ay talaashay 12 boqolkiiba.
Iyadoo ciyaaraha Olombikada xagaaga ee bishaan ka dhacaya Japan, Delta Variant ayaa hadheynaysa ciyaaraha. Sida laga soo xigtay warbixinnada, ku dhowaad saddex-meelood meel dhammaan kiisaska ka jira bariga Japan waxay ka yimaadeen Variant-ka waxayna gaari karaan boqolkiiba 50 bartamaha bishan. Tokyo iyo seddex maamul goboleed oo deris ah ayaa xaaladooda deg deg wax uga qabataa iyada oo dhawaanahan ay aad u soo badanayeen cudurada coronavirus. Guddoomiyaha Tokyo Yuriko Koike ayaa sheegay inay jirto suurtagalnimada in laga mamnuuco daawadayaasha inay ka qeyb galaan Ciyaaraha Olambikada ee qorshuhu yahay inay bilaabmaan 23-ka July haddii tirada kiisaska ay sii kordhayaan.
Qaybaha kale ee Aasiya
In Thailand, gaar ahaan Phuket, meeshan caanka ah ee loo dalxiis tago ayaa loo furay booqdayaasha si buuxda u tallaalay. Waqtigan xaadirka ah Alpha Variant oo markii ugu horreysay laga soo sheegay Boqortooyada Midowday (UK) wali waa kan ugu badan ee ka jira Thailand. Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyiinta Thai waxay sheegeen inay rajaynayaan in Delta Variant uu la wareegi doono iyada oo ah dacwadda ugu badan ee la soo sheegay dhawrka bilood ee soo socda. Thailand ayaa markhaati ka dhigtay inay tahay maalintii saddexaad ee isku xigta ee dhimashada ugu badan ay sabab u tahay COVID-19. Weli, Thailandon Jimcihii waxay soo tebisay maalinta saddexaad ee tooska ah ee dhimashada coronavirus diiwaanka. Noocyada 'Alpha', oo markii ugu horreysay laga helay Boqortooyada Ingiriiska, ayaa weli ah kuwa ugu badan ee waddanka ka jira, in kasta oo mas'uuliyiintu sheegeen inay filayaan in noocyada Delta ay ka taliso bilaha soo socda.
In South Korea, kiisaska coronavirus ayaa kor u dhaafay 800 shalay, oo ah kii ugu sareeyay muddo ku dhow 6 bilood. Celcelis ahaan tirada infekshannada cusub ee waddanka ayaa kordhay 10-kii maalmood ee la soo dhaafay, maamulka Seoul-na wuxuu dib u dhigay dabacsanaanta tallaabooyinka lagu kala fogeynayo bulshada. Waddanku wuxuu leeyahay oo keliya heerka tallaalka illaa iyo hadda in ka yar 10 boqolkiiba.
In Indonesia, Tallaabooyinka deg-degga ah ayaa maanta bilaabmay sababo la xiriira koror ku yimid kiisaska COVID-19 iyada oo tallaabooyinka la filayo inay sii jiraan ugu yaraan illaa iyo Luulyo 20.
In Hindiya, dowladdu waxay xooga saareysaa cufnaanta talaalada iyada oo laga jawaabayo kororka weyn ee kiisaska iyo dhimashada intii lagu jiray May iyo Juun.
Kordhinta kiisaska cusub ee Yurub ayaa dalxiiskii xagaaga hoos dhigay daruuro mugdi ah inkasta oo ay bilaabeen Midowga Yurub COVID-19 shahaadada safarka oo la rajaynayay inay kicin doonto dhaqdhaqaaqyo safar oo badan. Ingiriiska ayaa sidoo kale goobjoog ka ah kiisas badan oo Delta Variant ah, laakiin iyada oo ay taasi jirto, waddanku wuxuu qorsheynayaa in xayiraad nolosha lagu xirayo laga bilaabo Julaay 19. Jarmalka ayaa shalay sheegay in ay rajeynayaan in kala duwanaanta ay la xisaabtami doonto illaa 80 boqolkiiba kiisaska cusub bishan. Boortaqiiska, bandoo habeenkii ah ayaa la dejiyay.
Mareykanka sidoo kale waxaa ku soo kordhay infekshannada Delta Variant qeybo ka mid ah dalka halkaasoo heerarka tallaalku uu weli hooseeyo. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa shalay sheegay in dowladdu ay gargaar gaar ah u diri doonto goobahaas kulul ee ay ka jiraan cudurada sii kordhaya.